McKnight Award Award ee Farshaxanka
La Kulanka Award
In la aqoonsado farshaxanada sameyeen deeqo nololeed oo muhiim ah oo ay siiyeen Minnesota, kobcinta beelaha.
Abaalmarinta Farshaxannimada Sharafta leh ee $100,000 McKnight ee sannadlaha ah waxay aqoonsataa fannaaniinta sameeyay ballanqaad nololeed oo dhan si ay u abuuraan fan gudaha, gobol ahaan, iyo/ama heer qaran ah oo muhiim ah.
Farshaxanadani waxay doorteen in ay noloshooda iyo xirfadahooda ka dhigtaan Minnesota, taas oo ka dhigeysa in gobolkayaga meel hodan ku ah dhaqanka. Ugu horreyntii, waxay soo saareen farshaxan abuur leh oo soo jiidasho leh oo muujinaya aragtidooda gaarka ah iyo kuwa aan caadiga ahayn.
McKnight Kala-duwanaanshaha Fannaaniinta ayaa sidoo kale dhiirrigeliyay farshaxanno kale, kaqaybgalayaasha dhagaystayaasha, macaamiisha, naqshadayaasha, iyo xirfadlayaasha kale ee farshaxanka, qaarna waxay aasaaseen oo ay xoojiyeen ururada farshaxanka.
1Artist sanad walba
24Fanaaniinta ilaa 1998
2021 fanaan caan ah
Faye M. Qiimaha
Agaasime ahaan, jilaa, riwaayad, iyo hogaamiyaha fanka, Price wuxuu si weyn u saameeyay tiyaatarka Minnesota isaga oo soo hordhigay shaqadii siminaarka ee farshaxan -yahannada Madowga ah iyo inuu guursado masraxa nool oo leh caddaalad bulsho. Waxay ahayd agaasime-soo-saare wax-soo-saarka Tiyaatarka Guriga Pillsbury muddo 21 sano ah iyo xubin aasaase ka ah Tiyaatarka Penumbra iyo Tiyaatarka Dhiigga ee Isku-dhafan, halkaas oo ay ka soo abuurtay doorar badan waxayna abuurtay shaqo aasaasi ah oo ay sameeyeen fannaaniinta Madow oo hadda qayb ka ah qoob-ka-ciyaarka masraxa Mareykanka.
Wax badan oo ku saabsan Faye M. Price